Kedu ka David Bridburg nke Artist si emepụta ọrụ mbụ
Onye omenka gị David Bridburg
Nkwenye m, nkà bụ asụsụ sara mbara karịa okwu ọnụ. Inye echiche nke nka bu ihe nlere na ihe omuma nke n'eme ka onye obula n'ime anyi buru mmadu.
Na nkenke, Postmodernism bụ njikọ nke oge gara aga na nke ugbu a. Echiche m na-ahụ ma nke anya na nke nghọta.
Idobe echiche m na usoro obibi akwụkwọ bụ ụzọ m si eso ndị mmadụ ekerịta ihe.
Ndị mmadụ na ihe ngosi a na-ahụ anya nọ na ebumnuche ịchọpụta ihe osise mara mma. Olileanya, M ume gị agụụ.
Mmepe nke Artist
Ka m kwuo, enwere m nsogbu nhazi ihe, ntụpọ ọmụmụ. Achọpụtaghị nsogbu ahụ ruo mgbe m gbara afọ 28.
N’afọ 1981, ahapụrụ m Bloomfield High School, CT, Mahadum nke Houston ịmụ injinịa. Agụụ ụlọ gụrụ m, ọ na-esiri m ike ịmụ ihe. Alaghachiri m mgbe m gbara afọ iri abụọ, amalitere m ịmalite ọrụ site na UCONN.
Adaa na nka na mberede, edebanye aha m na klas nke ihe anya iji mezu isi ihe m choro, ma buru nwa akwukwo. N’ileghachi anya azụ, agụmakwụkwọ m nwere mmasị n’ịzụ ihe dị mma nke ukwuu.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, achọrọ m ịghọ onye ọchụnta ego. Achọghị m nkà n'ihe osise ọ bụla, achọghị m iji ihe osise ihe atụ ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụ anya. Mepụta ihe n'akụkụ ndị ọzọ bụ ọkpụkpọ m.
Na 2006, enwere m echiche nke ịse ihe osise n'otu ihe osise mere ochie ma tinye ya na kọmputa ọzọ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ naanị ihe m kpebiri ime, akụkọ ahụ ga-akwụsị.
N’afọ 2012, m na-amụ ihe n’onwe m, m kuziri onwe m Photoshop. Site na 2014, m na-achịkọta echiche iji banye na mmepụta. Rụ ọrụ dijitalụ nyere m ụzọ ọhụụ ọhụụ na nnukwu na micro.
My art bụ Postmodernism. Okwu mbu nke Post Modern Art bu na emeela ihe obula na nka. N'ụzọ dị ịtụnanya, aesthetics m Postmodernism bụ ihe ọhụrụ nye ndị na-ege ntị.
Taa dị ka onye mgbasa ozi na-ebipụta onwe ya, m na-enye katalọgụ m n'ịntanetị.
FineArtAmerica Corp, oge nchekwa zuru ụwa ọnụ na nchekwa. Na-ewetara ndị ahịa m ọmarịcha ahụmịhe ịzụ ahịa Bridburg.com.
All iwu na-emezu site Pixels / FineArtAmerica Corp. na ha Afọ Ojuju nkwa (Iwu nlọghachi). Maka ajụjụ gbasara iwu gị na-akpọ ọrụ ndị ahịa (na-ekwu nọmba nọmba) 24hours / day 7days / week. Maka ahịa ndị ahịa USA kpọrọ: (877) 807-5901. Maka ndị ahịa UK were kpọọ: 0800-014-8971. Pixels Corporation bụ isi ụlọ ọrụ na Santa Monica, CA.
Ajụjụ: on nọ na njem ịchọta onye omenkà izizi? Choputa ihe n’eme ihe osise puru iche.